Kora 37ffaa Tokkummaa Baratoota Oromoo Biyya Jarmanii (TBOJ)
Korri TBOJ waggaa wagaatti kan adeemsifamu inni 37ffaan magaalaa Münchenitti guyaa 08.09.2012 waaree booda sa’a 14:00 irraa eegalee hanga sa’a 18:00tti haala gaarii dhaa fi ho’aa ta’een gegeeffameera. Korri kun eebba bakka bu’oota damee amantii Kiristaanaa, Islaamaa fi Waaqefataan erga banamee booda yeroo itti fufu, waltajjii gegeessuudhaan kan qooda fudhate Jaal Qasim Ali, haala korichaa ilaalchisuun ibsa kan kenne akkasumas gabaasa waggaa kan dhiyeesse Jaal Mekonen Gurmeessa yeroo ta’an Jaal Mulugeta Giragn mata-duree, ‘Guddina Siyaasa tokkoo keessatti Ga’een Uumataa maal?’ jedhu irratti barumsa ball’aa gad fageenyaan hubannaa namaaf kennu kennaniiru. Kora kana irratti miseensoon harka sadii keessaa harki lamaa ol argamuun yeroo qooda fudhatan gaafii fi deebiin gegeefamuudhaan hubachiisi ball’aan godhameera. Itti dabaluudhaanis korri kun koree TBOJ kan waggaa itti aanuuf hojii gegeessan filatee sagantaan guyichaa sirnaan xumuramee ooluu isaa isin hubachiisaa xalayaa kanatti ibsa ejjennoo kora kanaa hidhuun webseite keesani irratti akka nu basitan kabajjaan isin gaafatina.
Bilisumaan Uumata Oromoo maraaf!
Tokkumaa Baratoota Oromoo Jarmanii (TBOJ)
Murtee Kora 37ffaa Tokkummaa Baratoota Oromoo Biyya Jarmanii (TBOJ)
Nuti Baratooti Oromoo biyya Jarmanii qubsumaan magaalaalee Jarmanii bakka adda addaa jiraanu guyyaa har`aa, Fulbaana 08.09.2012 magaalaa Munshintitti walitti dhufnee ogaa kora 37ffaa kana geggeessinu gammachuu gudaatu nutti dhagahama. Sababiin isaas TBOJ ijaarsottan Oromoo biyya ambaatti sagalee Oromoo alagaa biratti dhageesisuuf of-ijaaran kanneen hangafaa keessa isa tokko waan taaneefi. Sababiin ijaaramuu keenyaa gabrummaa fi hacuuccaa ummata Oromoo irratti humnaan fe`amee jiru dura dhaabbachuuf tahuun mara keenya biratti hubatamaa dha. Ammas haga Oromoon mirga humnaan sarbame mara deefatee abbaa biyyummaa mirkaneeffatutti ijaarsa keenyaa, TBOJn jabeessinee qabsoon karaa bifa kanaa fi haala adda addaan itti fufna jenna.
Baroottan kurnan-lamaan darban kana yoo of-duuba deebinee ilaalle TBOJs akkuma dhaabolee siyaasa Qabsoo Bilsummaa Oromoo (QBO) biroo rakkoo karaa qaama biraa itti dhufu irraan kan kahe hedduu mudatee laaffachaa akkasumas foxoqiinsi illee TBOJ akka mudate nu mara biraa dhakataa miti.
Sababiin laaffachuu fi foxoqiinsa TBOJ mudataa ture irraa faayidaa tokkollee argachuun hafee caalaatti jeequmssaa fi laafina jaarmichaa fiduun hubatamaa dha. Har`a garuu sababaalee kana irraa baratnee daandii rakkoo kanarraa walaba nu taasisu filatnee waan jiruuf kana akka injifannoo tokkooti ilaala. Kanas qabxiilee, marii keenya hara`a keessa akka tokkooti fudhatnee irratti dubatnee wal-hubannoo gahaarra waan geenyeefi.
Walumaa gala walgahiin keenya guyyaa har`a kun kanneen miseensoti TBOJ heddumminaan irratti argamanii qooda fudhatan waan taheef injiffannoo guddaan xumurre jenna. Akka walii galaatti TBOJ ammaa kaasee yaada armaan gaditti dhihaatan kana irraatti marii gahaa godhtee tuqaalee Ejjennoo kana fudhatee jira.
1. Gartuun tahe akka nam-tokkootti kanneen safuu fi aadaa Oromoo cabsuun hayyoota Oromoo irrattis tahe dhaabollee adda addaa mirga Oromoof falman irratti diinolee ummata Oromoo olitti ololaa fi maqa xureessii hujii kooti jedhanii facaasan mara dura dhaabbanna sana irraas akka dhaabbatan hubachiifnna.
2. Oromoon akka ijaaramee daandii filate maraan diina ummata Oromoo irratti hin qabsoofneef kanneen mirga wal-gurmmeessuu fi ijaaramuu Oromoo akka hawaasaa tahe akka siyaasaatti dura dhaabbatan ni morminna sana irraas akka ofqusattan hubachiifnna..
3. Dhaabboleen ykn jaarmoleen Siyaasaa Oromoo garaa garummaa gidduu isaanii jiru xiqqeesuun akka dhimma bilisummaa ummata Oromoof dursan gaafanna.
4. Jaarmolee Siyaasaa Oromoo fi Hawaasin Oromoo martuu akka qabeenya, dandeettii fi yaada qaban maraan wal-hubbannoon haala tokkumma QBO fi ummata Oromoo irratti hojjechuuf xiyyaafatan jabeessinee gaafanna.
5. Hawaasi Oromoo bifa adda addaan bilisummaan dhiibbaa jaarmiyyaa siyaasa Oromoo mara irraa walba taheen ijaaramanii akka QBO Oromoof gumaachuu qaban ejjennoo TBOJ tahuu jabeesinee hubachiifnna.
6. TBOJ akka maqaan isaa nu hubachiisutti Jaarmiyaa Baratootaa waan taheef akkuma jaarmolee hawaasa Oromoo bifa garaa garaan walababummaan ijaaramanii maraatti faayidaa QBOf gumaachanii takkatti, otuu dhaaba Siyaasaa Oromoo tokkoon hin masakamin ykn fedhii fi faayidaa Dhaaba Siyaasaa Oromoo mara irraa akka bilisa tahee irraa deebiinee hubachiifnna.
7. Kanaaf, nuti miseenssoni TBOJ marti yaada takkaan wal-hubannaa guutuun akka jaarmiyaan keenya, TBOJ walaba tahee muli’ata isaa fi dandeetii isaa maraan akka ummata Oromoo aangessu ykn humnneessuun hanga dand’ametti bilisummaan tumsa QBO akka tahee hujjetu irratti dubbannee walii-galuun yaada takkaan ejjennoo keenya kana irratti fudhachuu keenya hubachiifnna.
Tokkummaan Humnna !